Ny nosy Ko Krok. Pattaya. Thailand ~ Journey-Assist - Renin'ny Nosy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nosy Koh Krok (Pattaya)
Toetoetra mampiavaka ny nosy Ko Krok
Nosy Koh Krok
Ko Krok dia nosikely kely izay misy 8 km miala ny morontsirak'i Pattaya. Manodidina ny 0,05 metatra toradroa ny faritra Ko Krok. km. Any amin'ny faritra atsinanana amin'ity nosy ity dia misy moron-dranomasina voasarika, fa any amin'ny toerana hafa rehetra kosa, morontsiraka ny morontsiraka.
Ko Krok no toerana akaiky indrindra amin'i Pattaya izay misy ny fahafahana hilentika. Nisy rindrina azon'ny rano ambanin'ny ranomasina nanangana ny ilany andrefan'ny nosy. Ny habaka ao ambanin'ny rano dia voaravaka ny zaridaina anemone iray manontolo.
Nosy Koh Croc amin'ny sarintany
Na dia eo aza ny habeny kely, Ko Croke dia manana ny tanànany manokana - Ang Sila. Misy toeram-pisakafoanana marobe, toy ny fivarotana mivarotra asa tanana vita any an-toerana.
Aiza no misy sy ny fomba hahatongavana any amin'ny nosy Ko Krok
Ko Krok no misy any andrefan'ny Pattaya. Ny sambo avy ao amin'io fivarotana io mankany Koh Krok 45 minitra, sambo kely - 15 minitra.
Tsy misy fifandraisan'ny fitaterana matetika eo amin'ny tanibe sy ny nosy Ko Krok. Na izany aza, raha te milomano mankany amin'ny nosy sy miverina ianao, dia afaka mandeha taxi rano foana ianao.
Inona no tokony hatao any amin'ny nosy Ko Krok. Famandrihana sy snorkeling
Famonoan-tena amin'ny Ko Croke
Mahatratra hatramin'ny 14 m ny halalin'ny rano any akaikin'ny morontsirak'i Ko Krok. Misaotra an'io fa tsara tokoa io nosy io satria milentika sy mikitroka. Ny morontsiraka andrefana dia tsara kokoa raha ny filatsahana rano, satria ny vatany sy ny biby ao anaty rano ihany no misy. Manodidina ny 3-4 metatra ny halalin'ny toerana ireo, izay maneho ny toe-javatra mety amin'ny fikorisana sy ny fisandratana.
Na izany aza, amin'ny ankapobeny, ny fotodrafitrasa momba ny nosy ity dia tsy zarizary. Ny hany mahaliana dia ny tanàna kely iray antsoina hoe Ang Sil.
Torapasika eo amin'ny nosy Ko Krok
Ao amin'ny Ko Kroka ihany no misy ny moron-dranomasina izay 100 metatra ny halavany. Madio sy malefaka ny fasika eo amboniny. Raha ny amin'izany, ny tora-pasika ao amin'ny nosy dia tsy mitovy amin'ny torapasik'i Pattaya. Noho izany, mpizahatany maro no mitsidika ny nosy fa tsy milomano fotsiny.
Weather on ny nosy Ko Krok + milaza ny ho avy
Ny widget eto ambany dia mampiseho ny toetr'andro ankehitriny ao amin'ny nosy Ko Krok. Azonao atao ny misafidy takelaka ary mahita ny herin'ny rivotra, ny mari-pana, ny onja, ny orana, ny varatra ary ny fampahalalana fanampiny. Eo am-poton'ny Widget, azonao jerena ny toetr'andro mandritra ny andro vitsivitsy ao amin'ny nosy Ko Krok.